T-Nhare mbozha Deals | Zvipo Zvakanakisisa zve2017 - Payette Pamberi - Deals
hapana sim iphone 5 sprint
vhoriyamu bhatani isiri kushanda pane iphone 4
iphone 4 internet isiri kushanda
T-Nhare mbozha Deals | Zvipo Zvakanakisisa zve2017
Gore rino rave kuda kupera, uye T-Mobile zvakare ine zvimwe zvinhu zvinonakidza zvakatichengetera 2017. Kana iwe urikuronga kuzvipa mubayiro kune rako rese basa rakaomarara rawakaita, saka imwe yeiyi T-Mobile mipiro inogona kunge iine chaizvo zvauri kutsvaga. Tichaisa panze ichangoburwa T-Nhare mbozha inobata saka unogona kuwana kupihwa izvo zvakakunakira iwe.
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa foni chibvumirano muna 2017, iyo Samsung Galaxy On5 zvinogona kudaro. Unogona kuwana iyi smartphone zvemahara nechibvumirano chemari chemwedzi makumi maviri nemana neT-Mobile. Uyezve, iwe uchazonakidzwa risingagumi 4G LTE dhata yakaderera se $ 35 pamwedzi pamitsara mina neiyo T-Mobile ONE chirongwa.
Bhadhara yako isina waya chirongwa kwemwedzi makumi maviri nemana uye tora yemahara smartphone kumagumo: T-Mobile inoziva izvo vatengi vavo vari kutsvaga uye zviri pachena kwatiri kuti vari kuita nepavanogona napo kukwikwidza nevakuru vatatu vatakuri.
Samsung Galaxy S7 uye S7 Edge
Kana iwe uchida kuzvifadza iwe pachako, T-Mobile yakangodonhedza chitsva chitsva pane ichangoburwa smartphones iyo inoita kuti avo vakavimbika vatengi vawane chero iyo Samsung Galaxy S7 kana S7 Edge uye chengetedza $ 50. Iyo inopihwa-yenguva-yekupihwa uye inogona kunge ichichinjika chero nguva, asi isu tiri kuzvitaura nekuti isu tinofunga kuti ndeimwe yeakanakisa madhiri egore rinouya.
LG G5, LG G4, kana LG V10
Kana usiri mutsigiri weSamsoni mafoni, ndizvo zvakanaka zvakare: T-Mobile ine madhiri pane LG smartphones zvakare. LG inogadzira mamwe emhando yepamusoro uye akanakisa mafoni eApple pamusika. Paunotora foni ye LG, uchawana yemahara LG piritsi mushure mekusaina kusaina yegadziriro yedata inokodzera uye chibvumirano chemwedzi makumi maviri nemana kana iwe ukatenga chero LG G4, LG G5, kana LG V10. Ziva kuti iwe uchafanirwa kutora 1GB kana yepamusoro data chirongwa cheichi kupihwa kushanda.
foni inoenda yakananga kuvoicemail
Kana iwe uri mushandisi we iPhone, isu tinofunga kuti izvi iPhone 7 32GB foni dhizaini inogona kunge yakakwana kwauri. Uine $ 0 yekumberi mubhadharo, unogona kuve neiyi iPhone ye $ 27.09 chete pamwedzi. Kune wepakati smartphone mushandisi, 32GB yekumusoro inokwana. Kana iwe uchida zvimwe zvekuchengetedza, iwe uchafanirwa kubhadhara imwezve $ 19 kumberi pamberi peiyo 128GB uye $ 249.99 ye256GB.
Kuputira Kumusoro Akanakisa T-Nhare mbozha Deals
Wakatosarudza yako T-Nhare mbozha chibvumirano parizvino? Isu tinoshuvira kuti uyu mutungamiri wezvedu zvatinoda kupa zvinokubatsira iwe kuita sarudzo yakakunakira iwe. Yakanakisa rombo rakanaka, uye kana iwe uine chero mibvunzo, siya mhinduro pazasi!